မသုံးသင့် သော Android ဆော့ဝ် များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » မသုံးသင့် သော Android ဆော့ဝ် များ
ကိုရင့်အန်းဒရွိက်ဖုံးမှာ ဘာတွေထည့်ထားသလည်း.. ရေးပြပေးပါလား..။
ကျုပ်မတော့.. ဆော့ဖ်ဝဲ၁၅ခုလောက်နဲ့.. လေးလိုက်နေလေရဲ့..
နှိုင်းကြည့်ပြီး.. မလိုရင်.. ဖျက်ပစ်မလို့.. :harr:
ကိုလို အပ်တာ ပဲ ထားပါ ။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တော့ တူမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ကဲ ကျွှန်တေ်ာ သုံးတာကတော့ Music Sleep , DX battery booster , viber , 1mobile market , mx player ဒါ လောက် ပဲ သုံးပါတယ် ။
အဲ့ဒါကြောင့် i ဒဗိုက်တွေကို ကိုင်ကြဗါလို့ ပြောဒါပေါ့ဗျ။
ကျုပ်လည်းအရင်ကတော့ ဆိုနီအဲ့ရစ်ဆင် အိတ်စပီးရီးယား အန်းဒရိုက်လေးကိုင်ဖူးပါတယ်။
Mobile House ပြောသလိုပါပဲ ဆော့ဝဲလ်များများတင်ထားမှ လန်းတယ်လို့ထင်တယ်
ဘာမှဟုက်တိပတ်တိ မထည့်ရသေးဘူး အချိန် ၂၀ လောက်ရှိတဲ့ ကျောက်ခဲ ထမ်းထားရသလို
ဖြစ်နေတယ်။ ယခုလို မျှဝေမှုလေးအတွက် ကျေးဇူးပါနော……
http://www.mobilehouse.co.nr မှာ မော်ဒယ် အလိုက် မြန်မာဖောင့် ထည့် နည်းများ လေ့ လာနိုင်ပါတယ် ။
one day တုန်းက 1 မိုဘိုင်း မားကတ် ထဲ ဝင်တော့
အပ်ဒိတ် လုပ်ပါ ဆိုတာနဲ့လုပ်လိုက်တာ ၊ အပ်ဒိတ်လဲလုပ်ပြီးရော 1မိုဘိုင်းမာကတ် က သုံးလို့ မရဖြစ်ပါရော
သူ့ ထဲ ဝင်လို့ တော့ ရတယ် ၊ ပေ့ခ်ျ တစ်ခုပြောင်းလိုက်တာနဲ့၊ တန်းပြီး စတော့ ဖြစ်ပါလေရောဗျာ
အရင်အတိုင်း ပြန်သုံးလို့ ရအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုတာလေး နည်းလမ်းလေး မစပေးပါ
နောက်ပြီး ကျုပ်က Zd box ကို ၊ ဗားရှင်း အနိမ့်ကတဲက သုံးခဲ့တာ
အဲဒါကော ကောင်းရဲ့ လား ဆိုတာလေး ၊ အကောင်းအဆိုး သုံးသပ်ချက်လေး လုပ်ပါဦး
ကျုပ်သုံးနေတာတော့ အဆင်တော်တော်ပြေတယ်ဗျို့ 
ခုလို သိတာတွေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါ၊
ကျုပ်ကတော့ အိုက်ဒီ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ သုံးဘူးး
ကျုပ်ထဲ ချိဒါဂဒေါ့ …
ဂိမ်းဘဲ … အဟဲ ….
ဂိမ်းတောင်မှ ဖီးလ်နဲ့ ဆော့ရတဲ့ ဂိမ်းလေးတွေ …
ကျုပ်ဖုန်းထဲလည်း … ဟို လောင်ချာဂျီး ရှိနေဒယ် ..
သမ ပစ်လိုက်အုံးမယ် .. ကြာသလားလို့ …
ခုလို ဝေမျှပေးတာ ရှဲရှဲ ကမ္ဘာဘာ …
တခါတလေကျတော့လည်း ဒီလို သတင်းလေးတွေဖတ်ရတာ စားလက်စ ပန်းသီးကပဲ ပိုပို ချိုလာသလိုလို …
MobileHouse ရေ ….
နည်းပညာသမားမို့ ဒီနေရာ အသွားအလာ ကျဲမယ်ဆိုတာ သိပါရဲ့ …
ဒါပေမယ့် … ခဏတဖြုတ် အပန်းဖြေရုံ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ….
” မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆု နှင့် ရွာ့ဘုရားပွဲ “ ဆီကို ကြွရောက် အားပေးပါဦးလို့ ….
(((ထိပ်ဆုံးမှာ စတစ်ကီပို့စ် အဖြစ် တင်ထားပါတယ်)))
ဘာပြုလို့လဲ ဆိုတော့ MobileHouse ရဲ့ ဒီပို့စ်လေးက …
ဖေဖော်ဝါရီအတွက် ဇကာတင် ရွေးချယ်မှု ပို့စ်တွေထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့လို့ပါပဲ ….
ကိုင်းဗျို့ .. ကျုပ်ကို ဒီလို လာပြောခ ဆမ်ဆောင်း တစ်လုံး အလကား ပေးဒေါ့ …